SEM yeEcommerce - Nei uchiishandisa mune yako nzira yekutengesa? | ECommerce nhau
SEM yeEcommerce - Nei uchiishandisa mune yako nzira yekutengesa?
Susana Maria Urbano Mateos | | SEM
SEM yakakosha kune chero peji rewebhu hapana mubvunzo nezve izvo, zvisinei, pane zvikonzero zvakakwana nei ecommerce bhizinesi inofanirwa kuteerera kune izvi yekutsvaga injini yekushambadzira zano. Tichataura newe pazasi nezve nei uchifanira kushandisa iyo SEM yeEcommerce mune yako nzira yekutengesa.
1 SEM inobatsira sei yako Ecommerce?
1.1 Wedzera traffic yewebhu
1.2 Edza zvemukati
1.3 Tora mukana wezviitiko zvemwaka
2 Inoonekwa kumusoro kwekutsvaga mhinduro
SEM inobatsira sei yako Ecommerce?
Wedzera traffic yewebhu
Kunyangwe ichitaridzika sekudyara kukuru, iyo yekutsvaga injini yekushambadzira ndiwo mugero unobatsira zvikuru unosanganisira njodzi shoma. Kana iwe ukashandisa iyo PPC modhi, iwe unongobhadhara chete kana mushandisi achinyatso kudzvanya pane yako kushambadzira. Kunyangwe vashandisi vanosarudza kudzvanya vakatoratidza kufarira kufarira kwako, zvinoreva kuti unenge uine traffic yakawanda.
Kuedzwa chidimbu chakakosha mukumisikidza yakakura ecommerce saitiZvisinei, SEO inogona kutora mwedzi kuti ibudise mhinduro. Mukupesana, yakabhadharwa yekutsvaga inokutendera iwe kuyedza ako ekumhara mapeji ipapo ipapo. Unogona kukwirisa mapeji ari kuita mushe kuitira kuti vakwanise kurongeka.
Tora mukana wezviitiko zvemwaka
Para zviitiko zvemwaka senge Kisimusi, Chishanu Chishanu kana Zuva raamaiUnogona kunge watogadzira ako ese anodikanwa mapeji ekumhara. Dambudziko nderekuti kana uchibata nezviitiko zvemwaka, aya mapeji anogona kunge ari kugamuchira shoma kwazvo SEO traffic. NeSEM yeEcommerce, unogona kushandisa mamwe mazwi ekutsvaga anotsvaga vatengi vemwaka, kusimudzira iwo mapeji panguva yakakodzera uye kuwedzera huwandu hwetraffic iyo inogamuchirwa panguva yezviitiko zvemwaka zvakakosha kwazvo kune e-commerce.
Inoonekwa kumusoro kwekutsvaga mhinduro
Sezvo iye SEM senge SEO inogona kushandiswa senzira dzekuwedzera. Ndokunge, kuoneka kanoverengeka pamapeji ekutsvaga mitsva zvinowedzera mikana yekuti mushandisi anyore paEcommerce yako. Saka kunyangwe kana chinzvimbo mune yakabhadharwa mitsva yekutsvaga yatove yakarongedzwa, inogona kupa kukurudzira kune iyo Internet mufananidzo weEcommerce yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEM » SEM yeEcommerce - Nei uchiishandisa mune yako nzira yekutengesa?
Chii chinonzi colocation inomirira uye ndeapi mabhenefiti